संदेहको पतन पाप एक आध्यात्मिक भएकोमा शङ्का छ। दण्ड आध्यात्मिक अन्धा हो।
Vol।7जुलाई, 1908। नम्बर 4
DOUBT अप्रत्याशित र साथ सिक्ने को बीच साधारण प्रयोग मा एक शब्द हो। तर यो राख्नेहरूमध्ये केहि कम कर्मचारीहरूले विचार गर्न रोक्न र सिद्धान्तलाई हेर्छन् जुन शब्द खडा हुन्छ।
शंका आउँछ जोडी, दुई, जुनमा कुनै पनि चीजको बारेमा द्वैद्वको विचार समावेश छ, र सबै चीजहरूमा असीमित रूपमा विस्तार गर्ने। श doubt्का दुई वा दोहोरको धारणासँग सम्बन्धित छ, यो सँधै अनिश्चितताको साथ हुन्छ, किनभने यो विभाजित छ वा दुई बीचमा खडा हुन्छ। दुईको विचार पदार्थबाट आउँछ, जुन प्रकृति वा पदार्थको जरा हो। पदार्थ आफैमा एकसमान छ, तर यसको एक गुण expressed द्वैतबाट प्रकट हुन्छ। द्वयत्व भनेको सबै विश्वहरूमा अभिव्यक्तिको सुरूवात हो। द्वन्द्व प्रत्येक परमाणुमा रहन्छ। द्वन्द्व इकाई, पदार्थको दुई अविभाज्य र विपरित पक्षहरूमा हो।
विरोधीहरूको प्रत्येक indissolubly अन्य मा हावी छ र बारी मा अन्य द्वारा प्रभुत्व। एक पटक एक आतिथ्यमा र त्यसपछि अर्को हो। संधै दुई साथसाथै डराउनु, प्रत्येकलाई अर्को तिर झिक्न र बारीमा अर्कोद्वारा पछि बसिरहन्छ। दु: ख मात्र हाम्रो लागि जान्दछ जब यो एक मानसिक कार्य हो, तर शङ्काको विचार सबै वर्गमा प्रस्तुत छ, अभिव्यक्तिको सुरुवातदेखि ज्ञानको पूर्ण र पूर्ण प्राप्ति सम्म। सबै प्रकट भएका संसारहरूको माध्यमबाट दु: ख छ। त्यसै गरी, र यसको कार्य को विमान अनुसार भिन्न।
अचम्ममा यसको अभाव छ। यो उपस्थित भएको विकासको अनुसार डिग्रीमा परिवर्तन गर्दछ। मानिस मा, संदेह छ कि दिमाग को महत्वपूर्ण अवस्था हो, जसमा दिमाग दुई विषयहरु या चीजहरु मध्ये एक पक्ष मा निर्णय नहीं गर्नेछन्, र न कुनै मा विश्वास छ।
कुनै विषयको विषयमा दु: खको अन्त्य छैन, न त यो अनुसन्धान र अनुसन्धान हो, न त सोचको प्रक्रिया हो। यद्यपि यो अक्सर प्राय सोचा संग, र एक विषय मा अन्वेषण र अन्वेषण बाट पैदा हुन्छ।
डच एक क्लाउड जस्तो छ जुन दिमागमा चिसो छ र यसलाई स्पष्ट ढंगले बुझ्नदेखि रोक्छ, र कुन कुराको बारेमा कुनै समस्या समाधान गर्नबाट रोक्छ। क्लाउडको रूपमा, शंका बढाउँदछ वा घनत्वमा बढ्छ वा कम गर्दछ किनभने एकले उसको समझ अनुसार कार्य गर्न असफल हुन्छ वा आत्म-निर्भर हुन्छ र विश्वासको साथ कार्य गर्दछ। यद्यपि मानसिक दृष्टिको शुद्धता हासिल गर्न अघि मनपर्ने अनि आवश्यक पर्खनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा संदेह छ।
संक्रमित र सम्भावना संग सम्बन्धित, पूर्वजों, शिक्षकहरू, साथीहरू, सन्तानहरू र संदेहको सेवकहरूको रूपमा, अनैतिकता, हिचकिचाहट, अपमानिता, असहमति, असहमति, चिन्ता, असहमति, अविश्वास, अविश्वसनीय, अस्वस्थ, शंका, दुर्व्यवहार, foreboding, उदासीपन, मनमोहन, अपरिचितता, अनसन, अनिश्चितता, दासत्व, स्लॉट, अज्ञानता, डर, भ्रम, र मृत्यु। यी केही सर्तहरू हुन् जुन शङ्का थाहा हुन्छ।
दु: खमा दिमागमा गहिरो घृणा गरिन्छ, वास्तवमा दिमागको कार्यको एक साथ पर्याय हो: त्यो अन्धकारको रूपमा चिनिन्छ जुन दिमाग वा विशेषताको विशेषता हो। दु: ख को एक कारक हो कि मन को अवतार को लामो लाइन को पहिले देखि मन को अवतार को रूप मा निर्धारित गरेको छ। मानवता को कार्यहरु मा एक महत्वपूर्ण कारक भएको छ, धेरै पीडाहरु को प्रमुख कारणहरु मध्ये एक हो जुन मानवता को वारिस र यस अवस्था हो जसको मानवता वर्तमान संघर्ष मा छ। मानिसहरूको प्रगति र विकासको लागि बाधाहरूमध्ये एक दिनको दुश्मन हो।
संदेह जो मान्छे को आफ्नो दैनिक जीवन को हर बारी मा सामना गर्छन र उनको जीवन को महत्वपूर्ण संकट मा सबै सामने आए छ, पछिल्लो जीवनहरुमा विभिन्न स्थितियों को अधीन। तिनीहरू दिनहरू शङ्काका रूपमा देखा पर्छन् किनभने तिनीहरू कलमा पराजित भएनन्। तिनीहरू दिनहुँ मानिसहरूको प्रगतिलाई बाधा पुर्याउन वा एक्कासिमार्फत ज्ञानद्वारा पराजित हुन्छन्। संदेहको चक्र वा समय उठ्ने विकासमा निर्भर गर्दछ र उमेरको आधारमा जुन शङ्काको जस्तो चक्र यो व्यक्तिले अनुभव गरेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्दछ।
त्यहाँ चार प्रकार वा शङ्काको कक्षाहरू छन्। तिनीहरू भौतिक संसार र तिनको वरिपरिका तीन संसारहरू: शारीरिक संदेह, मानसिक संदेह, मानसिक संदेह र आध्यात्मिक संदेह। यी विभिन्न प्रकारका पुरुषहरू हो जसको हामी भेटिन्छौं, र राशिको चार पुरुषहरु जसले बनाएको र प्रत्येक व्यक्तिलाई समावेश गर्दछ। यी चार पुरुषहरू सम्पादक "द राशिक" मा बोलिन्छन् र प्रतीक गरिएको छ "शब्द," मार्च, 1907 (चित्रा 30).
शारीरिक संदेहले भौतिक संसार र भौतिक शरीरसँग सम्बन्धित, यसको प्रतिनिधि (नि: शुल्क)। दिमाग भौतिक शरीर मार्फत संचालित हुँदा यो भौतिक संसारको शारीरिक शरीरको क्रियाकलापको बारेमा भौतिक संसारको सबै घटनाले विश्वव्यापी हुन्छ। त्यसोभए दिमागले यो शारीरिक शरीरमा अभिनय गरिरहेको समयदेखि संदेह गर्न सुरु हुन्छ, र यसको शारीरिक शरीरले भौतिक संसारको बारेमा सजग हुन्छ। जनावरले मानिसलाई जस्तै मान्दैनन्। जनावर जन्मेको हुनाले चाँडै हिड्न थाल्दछ, तर मानवले खडा गर्न वा क्रल गर्न समेत सक्दैनन् र लामो महिना वा साढे बर्ष पहिले यसको खुट्टामा भरोसा राख्नु पर्छ र हिड्दा शरीरको समानता राख्छ। पशु मानव यो यसको आमाबाबुबाट एउटै प्रविधि ल्याउँदछ यसको रूपमा आमाबाबुबाट कुत्ते वा बाछो गर्दछ। यदि यो केवल विरासत को कारण थियो एक शिशु को हिड्न र आसपास को खेल को रूप मा एक ब्वाफ या एक पिल्ला को रूप मा खेलन को लागि उत्तेजित हुनु पर्छ। तर यो गर्न सक्दैन। यो तथ्य भनेको हो कि मानव पशु न केवल पशु प्रवृत्ति र यसको पुर्खाहरूको प्रवृत्तिका लागि मात्र हो, तर यो एक व्यक्ति इकाई, दिमागको अधीनमा छ; र नयाँ अवर्गीय दिमाग, वर्तमान अनुभवको विश्वास नगर्ने, हिड्न असमर्थ छ; यो संदेह र डर छ कि यसको शरीर पतन हुनेछ। यदि पहिलो पटक, घोडा, वा बिरालो, वा अन्य जनावरको लागि पानीमा फ्याँकियो, एकैचोटि किनारको लागि हड्ताल हुनेछ, भले यो स्वाभाविक रूपमा पानी लाग्दैन। यो पहिलो प्रयासमा तैर्न सक्छ। तर एक व्यक्ति को मध्य मध्य मा पहिलो पल्ट राखिएको छ, डूब हुनेछ, भले ही उनले प्रयास गर्नु अघि तैरने को सिद्धान्त सिक्नु भए तापनि। संदेह को तत्व मानव शरीर को प्राकृतिक जनावर संग हस्तक्षेप गर्दछ र यसको प्राकृतिक शक्ति को उपयोग गर्न को रोकथाम र तैरने को सिद्धांत को रूप मा राखयो जो यो सीखा थियो। भौतिक शरीरको प्राकृतिक क्रियाकलापले प्रायः शङ्कामा जाँच गरेको छ जुन मनमा उत्पन्न हुन्छ। यो संदेह एक दिमागमा यो शारीरिक संसारमा, मनमा माईकिएको छ जब सम्म संदेह हटाउन सम्म। भौतिक शरीर भौतिक संसारमा समायोजित हुन्छ, तर दिमाग यस संसारको लागि मूल होइन; यो यस भौतिक संसार र यसको शरीरमा अजनबी छ। आफ्नो शरीर संग दिमाग को असफलता को दिमाग मा संदेह को तत्व को उनको कार्रवाई मा हावी र शरीर को नियंत्रण संग हस्तक्षेप गर्न को अनुमति दि्छ। यो जीवनको सबै परिस्थिति र परिस्थिति र स्थितिहरूमा लागू हुन्छ जुन वंशानुभूति हो।
बिस्तारै, दिमाग यसको भौतिक शरीरको आदी हुन्छ र यसको रमाईलाले आराम र अनुग्रहलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम छ। यदि, मानिसको नियमित रूपमा विकासमा, भौतिक संसारको चीजहरू सिक्न पछि तिनको लागि आवश्यक हुन आवश्यक छ जस्तै, उदाहरणका लागि, शरीरको व्यायाम र अनुशासनको रूपमा, व्यवसाय वा व्यावसायिक माध्यमबाट यसको रखरखाव र आजीविका पोखरेल, मंसिर29 - मंसिर 19गते मंसिर 19गते मंसिर29 गते मंसिर2गते बिहान बिहानै बस दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि दिमागले शङ्काको सुरुवात चरण पार गर्यो र संदेहले सामना गर्दछ जुन अज्ञात संसारका बारेमा उत्पन्न हुन्छ।
जब एक मानसिक दुनिया को राज्यहरु लाई चीजहरु लाई शारीरिक संवेदना मा उत्तेजित या अपमानित गर्दै छन्, संदेह मा ध्यान दि्छ कि एक अदृश्य दुनिया, भित्र को भित्र र भौतिक को आसपास, किनकी त्यो मन समायोजित र यसको परिचित हो शारीरिक शरीर, र द्वारा शिक्षित र भौतिक संसार को भौतिक र चीजहरु को लागी शिक्षित छ। यसले शंका गर्दछ कि भौतिक क्रियाकलापको मूलमा अदृश्य स्रोतमा हुन सक्छ। त्यस्ता संदेहहरूले अचेत वा मनोवैज्ञानिक संसारलाई आफ्नो इच्छा र ढाँचाको साथ सम्बद्ध गर्दछ। मनुष्यमा यसको प्रतिनिधि लिंगा तीव्रता हो, वा शरीर (क्योगो-वृश्चिक, ♍︎-♏菜), यसको पशु प्रविधि र प्रवृत्तिका साथ।
यी संदेहहरू हो जुन मानिस अधिकांशसँग व्यवहार गर्न र आफ्नो दैनिक र भावनात्मक जीवनको विरुद्धमा विवादित छन्। यहाँ भौतिक कार्यहरूको छिटो स्प्रिंग्सहरू छन्। यहाँ शक्ति र संस्थाहरू छन्, वा हो, शारीरिक कार्यहरू को कारण र क्रोध, डर, ईर्ष्या, र घृणा, र अन्य सनसनीहरू जस्तै खुशी र मूर्खता आनन्दको भावना जस्ता भावनाहरु। यहाँ सेना र संस्थाहरू छन् जुन मानिसको नाजुक समायोजित मानसिक शरीरमा कार्य गर्दछ। यी भावनाहरु र संवेदनाहरु लाई मानसिक निकाय को माध्यम ले आफ्नो इंद्रों संग भौतिक शरीर को माध्यम ले अनुभवी गरिन्छ। सेना शारीरिक मानिस को लागि अदृश्य छ, तर केहि मानवीय व्यक्तिहरु द्वारा, या "मध्यम," को माध्यम ले या रोग को माध्यम देखि प्रकट, मानसिक मान्छे को पर्याप्त मुक्त या शारीरिक शरीर को कोइल देखि अलग छ ताकि यसको सनसनी माथि माथि र भौतिक संसार भित्र ओक्टेवमा अंकित गरिन्छ।
भौतिक मानिसलाई सम्बोधन गर्ने सबै संदेहहरू यहाँ भेट्न र पराजित हुन्छन्, भित्री शरीरमा पराजित भए जस्तै। तिनीहरू केवल मानसिक संसार र खगोल रूपको शरीरमा पराजित हुन्छन् जुन तिनीहरूसँग भेटिए र शारीरिक रूपमा पराजित हुन्छन्।
शारीरिक र मानसिक संसार र उनको पुरुष माथि र माथिको मानसिक संसार हो र यसको अवतार दिमाग (जीवन-विचार, ♌︎-♐︎)।
यो संसार हो जसमा मानिस धेरै भन्दा बढी रहन्छ र दिमाग को आवश्यकता को लागी शारीरिक शरीर संग कार्य गर्न को लागी, यो संसार हो जसमा उनले सबै भन्दा अधिक संदेह गर्छन। शारीरिक शरीरको आचरण प्रयोग वा दुर्व्यवहारबाट, दिमाग यसको भौतिक जीवनसँग सम्बन्धित छ त्यसैले यसले वास्तविक भौतिक र शारीरिक शरीरबाट अलग भएको जस्तो बिर्सिएको छ। दिमागले आफ्नो शरीर र भौतिक जीवनको साथ मात्र सोच्न मा पहिचान गर्दछ, र जब सिद्धान्तले सुझाव दिएको छ कि दिमाग र विचार भौतिक भौतिकबाट अलग छ, यद्यपि यो संग जोडिएको छ, दिमाग संदेह र यस्तो कथन अस्वीकार गर्न मिल्छ।
यो संदेह अनौपचारिक रूपमा भन्दा बढी सिक्न को लागी धेरै पटक फेला पर्यो, किनभने सिक्नु मानिसले मात्र चीजहरूमा सिकेको छ जसले भौतिक संसारको सम्बन्धमा दिमागलाई लागू गर्दछ, र जसले आफैंलाई चीज र विषयको बारेमा सोच्न खोज्छ। भौतिक संसारलाई सख्तीसित सम्बन्धित आफ्नो विचारको आधार छोड्न र उच्च विमानमा बढ्न असम्भव छ। सिकेको मान्छे एक दाखरस जस्तै छ, जुन वस्तुमा छान्नु भएको छ जसमा यसको बाहिरी छ र आफैले घुम्न थाल्यो। यदि दाखिलले पक्कै इन्कार गर्नु पर्छ भने, यसको रूटहरू छोड्न, गहिराइ मार्ने र गहिरो आमाबाबुबाट बढ्न सक्षम हुनु पर्छ, यो दाखर बन्न हुनेछ। यदि सिके मानिस अन्य दिमागमा रित्तोबाट मुक्त हुन सक्दछ, र उहाँका विचारहरू आमाबाबुको भित्तामा पुग्छ र अर्को दिमाग बढेको हुन्छ, त्यसपछि, बिरुवाको रूपमा, उसले अन्य वृद्धिमा बढ्नु पर्दैन। र उनको आफ्नै झुकाव को रूप मा उनको आफु को पालन गर्न को लागी बाध्य छ, तर त्यो व्यक्तिगत विकास हुनेछ र मुफ्त हावा मा पुगन र प्रत्येक पक्ष देखि प्रकाश प्राप्त गर्ने अधिकार छ।
दाखिलले आफ्नो वस्तुलाई समात्छ। यो अन्यथा गर्न सक्दैन किनकी यो केवल एक दाख-पौधा हो, सब्जी विकास हो। तर मानिसले आफ्नो विचारलाई सिक्न र विकासको विकासबाट बढ्न सक्षम बनाउँछ किनभने उहाँ आध्यात्मिक उत्पत्तिको मानिस-रोपण हुनुहुन्छ जसको कर्तव्य र भाग्य यो प्रकृतिको भव्य राज्यहरूबाट बढ्दै जान्छ र आध्यात्मिक ज्ञानको चमकदार क्षेत्रमा । मात्र सिक्न र पेन्टिट्रेरीको मानिसले संदेहको कारण तिनको शिक्षाभन्दा बढी बढ्दैन। दु: ख, र डराउने संदेहको बच्चा हो जो डर, उसलाई अझ बढाएर उसले सिक्नमा निर्भर गर्दछ। दु: खको कारण तिनको हिचकिचाइको कारण हो। उहाँ धेरै लामो हिचकिचाउनुहुन्छ; त्यसोभए उनीहरु बिस्तारै बिहे गरेकी थिईन र उनीहरु आफुलाई बिहे गरेकी थिईन। उनीहरु आफुलाई बिहे गरेकी छिन्।
दिमागले मानसिक संसारमा अभिनय दिमागको रूपमा व्यवहार गर्दछ जुन भौतिक संसारबाट अलग हुन्छ, जुन संदेहले सधै अनुमोदन गर्दछ। मस्तिष्कको सन्दर्भमा समस्याहरू: जस्तै: भगवान र प्रकृति, मानिसको मूल, जीवनमा कर्तव्य, अन्तर्वार्ताको बीचमा भिन्नता, जो मानसिक संसारमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने सबै दिमागहरू सामना गरेका छन्।
यी प्रश्नहरू, वा इन्द्रको मनको सम्भावित स्वतन्त्रताको कुनै पनि सम्बन्धमा संदेह छ, मानसिक दृष्टिलाई अन्धकार गर्न प्रवृत्ति छ। यदि मानसिक दृष्टि गाढा छ भने मनले आफ्नै प्रकाशमा विश्वास गुमाउँछ। हल्का बिना यो समस्या देख्न वा समस्याहरू समाधान गर्न सकिँदैन, न त यसको बाटो देख्न सकिन्छ, र यसैले यो सोचका भित्री क्षेत्रहरूमा फर्किन्छ जसको साथ यो परिचित हुन्थ्यो।
तर दिमागले आफ्नो स्वतन्त्र कार्यमा विश्वास गरेको मनमा शङ्काको अन्धकारलाई पराजित गर्दछ। यसले एक्कासी संसारको माध्यमबाट यसको आफ्नै कार्य देख्छ जुन यसले सिर्जना गरेको छ। विश्वको आफ्नै विचार र मानसिकतालाई आत्मविश्वास र मानसिकता देख्न सकिन्छ, यो मानसिक संसारको रूपहरु मानसिक संसारका विचारहरु द्वारा निर्धारित हुन्छन् भनेर देख्छन्, इच्छाहरु को भ्रम र भावनाहरु को असफलता को भ्रम को कारण हो विचार र विचारका विवादित क्रस-धाराहरू, जुन मानसिक संसारमा रूपहरू जस्ता सामर्थ्यहरू र प्राणीहरूको कारण दिमागद्वारा उत्पन्न विचारहरूले निर्धारण गर्दछ। जब यो महसुस हुन्छ, भावनाहरु र संवेदनाहरु को कारणहरु को बारे मा सबै संदेहहरु सफा गरिन्छ, एक कार्य स्पष्ट रूप देखि देख्यो र उनको कारणहरु लाई जानिन्छ।
आध्यात्मिक संसार र आध्यात्मिक मनुष्यको बारेमा संदेह अनौपचारिक इकाई संग गर्न को लागी छ जो अवतारित दिमाग मार्फत शारीरिक र भौतिक सम्पर्क गर्दछ। सार्वभौमिक संसारको आध्यात्मिक संसारको प्रतिनिधिको रूपमा आध्यात्मिक मानिस मानव उच्च दिमाग, यसको आध्यात्मिक संसारमा व्यक्तित्व (क्यान्सर-मंगलबार, ♋︎-♑︎) हो। यस्तो अव्यवहार को रूप मा अवतारित दिमाग मा हमला गर्दै छन्: कि यो मृत्यु पछि रहन सक्छ; जुनसुकै कुरा सबै चीजले भौतिक संसारमा आउछ र मृत्युले भौतिक संसारबाट बाहिर जान्छ, त्यसैले यो पनि भौतिक संसारबाट बाहिर जान्छ र अवस्थित बन्द हुनेछ; त्यो विचार शारीरिक उत्पादनको कारण हुनुको सट्टा उत्पादन वा शारीरिक जीवनबाट प्रतिक्रिया हुन सक्छ। अझै अझ बढी गम्भीर शंका छ, यद्यपि दिमाग मृत्युको पछि लाग्नैपर्छ, यसले पृथ्वीको जीवनसँग सम्बन्धित एक राज्यमा प्रवेश गर्नेछ, जुन शरीरमा शरीरमा शरीरको जीवन कहिल्यै समाप्त हुनेछ र यो पृथ्वीमा फर्किने छैन जीवन।
दिमागले अस्तित्व वा ज्ञानको आध्यात्मिक संसारमा रहेको सम्भव अस्तित्वलाई संदेह गर्दछ जुन अस्तित्वको सबै चरणहरूको विचार हो, जसको विचारले यसको उत्पत्ति लिन्छ; कि ज्ञानको यो निरन्तर संसार, यसको अनौपचारिक आदर्श रूपहरू संग, मानव मनको फैंसीको कारण हो कि यो एक आध्यात्मिक तथ्यको बयान हो। अन्ततः, अवर्गीय दिमाग संदेह छ कि यो अमर मन संग सार र सार्वभौमिक जीवन संग नै छ। यो संदेह सबै को सबै भन्दा गम्भीर, विनाशकारी र गहिरो संदेह हो, किनकि यो दिमाग अलग गर्न को लागी हुन्छ र जुन पारदर्शी अवस्थाहरु को विचिसम्म को अधीन छ, यसको अनन्त र अमर आमाबाबु बाट।
दु: ख एक विभेद पाप हो। संदेहको यो पङ्क्ति पाप एक को आध्यात्मिक हुनमा शंका छ। यस संदेहको दण्ड आध्यात्मिक अन्धापन हो र उनीहरूलाई संकेत गरिरहेको बेलामा कुनै पनि कुरामा आध्यात्मिक सत्यहरू हेर्न असमर्थता छ।
विभिन्न पुरुषहरूको संदेहको कारण दिमागको अव्यवस्थित अन्धकार हो। अन्धकार नभएसम्म आन्तरिक लाइटबाट टाढिने वा परिवर्तन गरिन्छ, मानिसले संदेह जारी रहनेछ र यस अवस्थामा रहनेछ, जसमा उसले यहाँ पत्ता लगाउँछ। विकास द्वारा अमरता को संदेह मानिस मानिसको दिमागमा बढाएको छ जसले मानिसहरूमाथि आफ्नो मन नियन्त्रणमा पार्दछ र आफ्नो जीवन नियन्त्रण गर्दछ। दिमाग अघि डर राखिएको छ र संदेहको जुत्ता प्रेत बनाइएको छ। पुरुषहरूलाई आफैं पुजारीको रूपमा अनुमति दिईन्छ, मानसिक अन्धकारमा राखिएको छ र संदेह र डरको जुत्तामा लुगा लगाउनु पर्छ। यो न केवल असाधारण जन मा लागू हुन्छ, तर यो ज्ञान को पुरुषहरु लाई पनि दिमाग को शुरुवात प्रशिक्षण द्वारा केहि grooves मा दौडिएको छ, र जसले आफ्नो grooves भन्दा बाहिर उद्यम को डर छ र उनको उन बाहिर बढने क्षमता को संदेह छ।
शंकाले शक गर्छ। जो मान्छे लगातार संदेह हुन्छ आफैलाई दु: ख र उनको चारैतिरको कोटको दुरुपयोग हो। लगातार संदेहले मानिसलाई हानिकारक बनाउँछ, आफ्नो कार्यको नतिजालाई डरलाग्दो डरले कसलाई कमजोर बनाउन कसले कमजोर पार्छ। एक भविष्यमा आशा या आत्मविश्वासको विषयमा, उनीहरूको सम्बन्धमा उनीहरुका विश्वासहरु लाई निराश पार्न को लागी दु: खी र बिकर गर्न को लागी दु: ख को खोजी र सोध्न मन लाग्न सक्छ। विश्वास र आशाको ठाउँमा, असामान्य छोडेर असन्तुष्टि र निराशा छोड्न। दु: खको मनमा शंका उत्पन्न हुन्छ जुन बेइमानी र अपमानजनक छ र अरूको मनमा संदिग्ध हुन्छ, जसले सबै कुराको साथ गल्ती गर्छ, जसले निन्दा गर्दछ र दोषी बनाउँछ र सबैले आफ्नो दिमागमा पाएको शंकामा सबैलाई संक्रामित गर्ने प्रयास गर्दछ।
दु: ख भनेको अनिश्चितता हो जसले दिमागको बीचमा हिंड्ने, र कहिल्यै निर्णय नगर्ने, एक कुरा वा अर्को। दुई या अधिक राज्यों को बीच oscillating को परिणाम को रूप मा एक दिमाग मा दिमाग मा फेंक दिए छ र कुनै पनि मा निपटने या निर्णय नहीं। त्यसोभए हामी दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू पाउँदैनौं जुन कुनै निर्णय वा निर्णयमा कहिल्यै निर्णय गर्दैन, यदि उनीहरूले निर्णय गर्नुपर्छ भने उनीहरूले केही संदेह वा डरले गर्दा निर्णयको बारेमा उत्पन्न हुन नसक्ने काम गरेन। दिमागको यो अनिश्चितता र कार्य गर्न इन्कार गर्न दिमागले कम निर्णय गर्न र कार्य गर्न सक्षम बनाउँछ, तर स्लाथ र अज्ञानता र भ्रष्टतालाई प्रोत्साहित गर्छ।
यद्यपि, संदेहको लागि एक उद्देश्य छ, यो भाग मानिस को विकास मा खेल्छ। दिमागको सुरुवातहरूमा दु: खको उज्यालोमा प्रकाश छ। सबै सडकहरूलाई ज्ञानको लागि डोऱ्याउनुहुन्छ। तर दिमागमा संदेहको सामना गर्नु पर्छ यदि त्यो दिमागले भित्ता भित्र आन्तरिक संसारहरूमा पारित गर्दछ। दु: खको ज्ञानको अभिभावक हो जसले डरलाग्दो र कमजोर-मननलाई रोक्छ जुन आफ्नो आफ्नै ठाउँ भन्दा बाहिर जान्छ। दु: खको शक्तिले मानसिक शिशुहरूलाई पछाडि पुर्याउँछ जुन जुनसुकै प्रयास बढ्न चाहन्छ, र ज्ञान बिना बुद्धिमानी हुन्छ। अन्धकारको रूपमा पशु र बिरुवाको विकासको लागि आवश्यक छ, त्यसैले विकासको लागि आवश्यक संदेहको अन्धकार पनि हो।
संदिग्ध दिमाग जसले सही निर्णय वा नराम्रो व्यवहार सिकेन जीवनमा महत्वपूर्ण क्षणमा देखाइएको छैन। यस्तो, उदाहरणका लागि, जब जो दुई क्यारियरहरूको रूपमा भ्रमित छ भने विपरीत दिशाबाट आउँछ। उहाँले पहिलो तरिकालाई हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि अर्को, खतराबाट बच्न कुन तरिकाले बेवास्ता गरियो। यस असम्बन्धित शङ्कामा भाग लिईएको छ, गलत कार्यको अजीब विपत्तिलाई सम्बोधन गर्न लगाउँदछ, जस्तै कि घोडाहरूको खुट्टामा अलिकति चल्छ।
जो दुई पदहरु को बीच मा निर्णय ले राख्छ उनको सही चुनाव को उनको संदेह को कारण, सामान्यतया को सबै भन्दा राम्रो मौका जाने को लागी को रूप मा जाना छ। अवसर कहिल्यै पर्खदैन। अवसर सधैं गुजर रहेको भए पनि उपस्थित छ। अवसर अवसरहरूको जगेडा हो। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। निरन्तर अनौठो र अवसरहरू हेर्न असफलताले यसको छनौट गर्न वा कार्य गर्न क्षमतामा एक कारणले गर्दा। जो निरन्तर रूपमा आफ्ना विचारहरू र कार्यहरू संदेह गर्दछ, एक वर्तमान विश्वप्रार्थता, अल्पविश्वास, र निराशाको कारणले गर्दा सबैले क्रियाकलापमा विश्वासको विरोध गरेका छन्। गोप्य क्रियाकलापको हातले हातले सीधा बललाई चिन्ह लगाउँदछ। हातमार्फत हिँड्नु, शरीरको गाडीबाट, टाउकोको झोलामा, आँखाको नजरले, आवाजको आवाजले, शङ्काको मानसिक अवस्था वा काम गर्ने व्यक्ति विश्वास संग देखा पर्न सक्छ।
दु: खी अन्धकार र अनिश्चितकालीन चीज हो जसको साथ दिमाग संघर्ष गर्छ र यसलाई बलियो बनाउँछ। ज्ञान आउँछ वा उकालो भएको छ जस्तै शंकामा पराजित हुन्छ, तर शंकाले मात्र ज्ञानले पराजित हुन्छ। त्यसोभए हामी कसरी संदेहको सामना गर्नेछौं?
विश्वस्त निर्णयले गर्दा निर्णयले संकेत गर्दछ जुन संकष्ट गर्दछ। परीक्षाको आधारमा दुई विषयहरू वा चीजहरू भन्दा धेरै भन्दा राम्रो छ जुन कुरा अनौठो कार्यको अन्धाको विश्वास होइन, न त यो शंका हुन्छ, यद्यपि संदेहमा प्रवेश गर्छ र मनले गर्दा उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न अस्वीकार गर्दछ। संदिग्ध कहिल्यै निर्णय हुँदैन; यो सधैं हस्तक्षेप गर्दछ र निर्णय रोक्छ। यदि एक शंकामा पराजित हुन सक्छ भने, दुई वस्तुहरू बीचको छनौट वा कुनै प्रश्नको निर्णयमा उसले सोचेको छ कि प्रश्नको सावधानीपूर्वक विचार गरिसकेपछि परिणामलाई नराम्रो वा डराउनु होस् भने निर्णय गर्नुहोस् र तनहुँ कार्य गर्नुहोस्। यदि एक निर्णय गर्न र अभिनयले आफ्नो निर्णय कम गरेको छ र कारवाही गलत साबित हुन सक्छ र, वास्तवमा, यस्तो अवस्थामा, यो प्राय: गलत छ। यद्यपि, उसले अर्को विषय वा प्रश्नमा जाँच्न जारी राख्नुपर्दछ र निर्णय नगर्न र निर्णय बिना कार्य गर्दछ। यो निर्णय र कारवाही अघिल्लो गलत निर्णय र कार्यमा गल्तीको सावधान सावधानी पछि लिनु पर्छ। एक कार्यले गलत साबित गरेको छ भने अनावश्यक संदेहमा फिर्ता झिक्नको लागी, यद्यपि यो त्यो समयमा सही भएको मानिएको थियो, दिमागमा पछाडी छ र वृद्धि रोक्छ। कसैले आफ्नो गल्ती पहिचान गर्नुपर्छ, यसलाई स्वीकार गर्नु पर्छ र कार्य जारी राखेर यसलाई सच्याउनु पर्छ। उनको गल्तीले उहाँलाई यो हेर्न को लागी उसलाई सक्षम गरेर लाभ उठाउनुपर्छ।
निरन्तर निर्णय र कार्य गरेर, एक गल्तीहरूको पहिचान र ती सबैको लागि स्वीकार्य प्रयास गर्ने र त्यसलाई सच्याउने, एकले सही कार्यको रहस्य समाधान गर्नेछ। एक निर्णय गर्न र कार्य गर्न र एक दृढ विश्वास र विश्वास द्वारा सही कार्य को रहस्य को समाधान गर्न हुनेछ कि त्यो सार मा एक सार्वभौम मन या भगवान संग, आफ्नो व्यक्तित्व, मानव उच्च या ईश्वरीय दिमाग को माध्यम ले, र उनको सचेतना त्यो स्रोतबाट आउँछ र उनको विचारलाई उजागर गर्नेछ। यदि यो विचारमा एक श्रोताले यो मनमा निरन्तरता राख्दछ, यसलाई मनमा निर्णय गर्दछ र निर्णय अनुसार कार्य गर्दछ, त्यो कुनै लामो समय बुद्धिमानी निर्णय गर्न र सही रूपमा कार्य गर्न सिक्ने छैन, र सही निर्णय र केवल कदम आउनेछ। ज्ञान को हकदार मा जो आफ्नो आमाबाबु भगवान द्वारा बक्से छ, जित को उनको कमाई हो।